Nesorin'i UK ny fandraràna ny elektronika tao anaty tranokely fiaramanidina avy any Torkia sy Tonizia
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Nesorin'i UK ny fandraràna ny elektronika tao anaty tranokely fiaramanidina avy any Torkia sy Tonizia
Nanambara ny Sampan-draharahan'ny Fitaterana UK androany fa hisy telefaona finday, solosaina finday ary takelaka lehibe avela ao an-trano amin'izao ny ankamaroan'ny sidina mankany UK avy any Torkia sy Tonizia.
Ny fameperana amin'ny fitondrana telefaona lehibe, solosaina finday, ary takelaka ao an-trano dia nesorina tamin'ny sidina rehetra avy any UK avy amin'ireto seranam-piaramanidina manaraka ireto:
- Antalya (Torkia)
- Bodrum (Torkia)
- Hurghada (Egypt)
- Istanbul Sabiha Gökçen (Torkia)
- Izmir (Torkia)
- Luxor (Egypt)
- Marsa Alam (Egypt)
- Tunis-Carthage International (Tonizia)
Ireo mpandeha amin'ny sidina izay nesorina ny fameperana dia afaka mitondra telefaona finday, solosaina finday, takelaka ary kojakoja ao anaty tranony miaraka aminy. Mbola hitohy ny fameperana entana mahazatra.
Ny fameperana dia nesorina ihany koa tamin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka maromaro miasa amin'ny seranam-piaramanidina hafa. Ny ankamaroan'ny mpitatitra miasa amin'ny seranam-piaramanidina Tiorka dia tsy iharan'ny fameperana intsony. Na izany aza, ny mpandeha dia tokony hifandray amin'ny seranam-piaramanidiny raha mila torohevitra momba ny sidina misy azy ireo.
Ity pejy ity dia havaozina amin'ny toeran-seranam-piaramanidina, raha vantany vao nesorina ny fameperana ireo seranam-piaramanidina voakasik'izany rehetra izany.
Ny governemanta UK dia nanafoana ny fandrarana tsy hitondra fitaovana elektronika goavambe ao anaty tranona fiaramanidina misy sidina sasany mankany UK.
Ny fameperana amin'ny fitondrana telefaona finday, solosaina finday, takelaka ary kojakoja ao anaty tranon'ny sidina avy any UK avy any Torkia, Egypt, Saudi Arabia, Jordania, Lebanon, ary Tonizia dia natomboka tamin'ny volana martsa.
Na izany aza, taorian'ny niarahany niasa tamin'ny indostrian'ny fiaramanidina sy ny mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena hampiditra fepetra fiarovana fanampiny henjana, ny governemanta UK dia nanomboka nanala ireo fameperana ireo amin'ny sidina sasany any UK.
Mijanona ao amin'ny seranam-piaramanidina hafa ny fameperana ary hongotana isaky ny tranga ny governemanta UK rehefa manamarina fa nametraka fepetra fiarovana hafa ny zotram-piaramanidina, ary azo antoka sy ampitahaina izany.
Ireto seranam-piaramanidina manaraka ireto dia mitohy miantraika amin'ny fameperana, na dia misy aza ny orinasam-pitaterana an'habakabaka tsirairay. Ireo mpandeha mandeha avy amin'ireo seranam-piaramanidina ireo dia tokony hifandray amin'ny seranam-piaramanidiny raha mila torohevitra momba ny sidina misy azy ireo:
- Arabia Saodita:
Boeing sy Embraer dia manamafy ny fifanakalozan-kevitra amin'ny mety ho fitambarana